नेकपामा समस्या ल्याउनका लागी अघि सर्ने धेरै छन् : प्रधानमन्त्री « Khabar24Nepal
नेकपामा समस्या ल्याउनका लागी अघि सर्ने धेरै छन् : प्रधानमन्त्री
फागुन १ ,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा फुट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । तर, कोहि आए पनि त्यो सफल नहुने उनको दाबी छ ।
देश सम्वृद्धिको बाटो मा हिडिसकेको छ अब कसैले रोक्न सक्दैन , अबको ५ वर्ष सम्म निरन्तर बिकास मा अगाडी बढिरहन्छ बिकास तथा राष्ट्रियता कायम यहि सरकारले गर्ने छ ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाआमालाई एकअर्काबारे कुरा लगाएर झगडा गराए जस्तो नेकपामा पनि समस्या ल्याउने प्रयास भरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी नेकपा हो । त्यसभित्र समस्या पैदा गर्ने कोशिश ओहो ! थामिसक्नु छैन ।’
प्रधानमन्त्रीले बाआमाको झगडा गराउने प्रयास कसरी हुन्छ भनेर सुनाए ।
बा को कानमा गएर भन्ने, बा आमा बोक्सी छे । आमाको कानमा गएर भन्ने, आमा बाले जड्याहा भइसके ।
दुबैले पत्याउँदैनन्, फेरि भन्ने ।
बा, पत्याउनुहुन्न तर के गर्ने, आमा भरे मुख सुँघ्न आउँछे ।
आमाको कानमा गएर भन्ने, तपाईँ पत्याउनु हुन्न । गएर मुख सुँघ्नुस् न कस्तो गनाउँछ ?
नभन्दै आमाले गएर मुख सुँघ्छे । रक्सी त गनाएको हुँदैन तर, बाउलाई पक्का हुन्छ कि मुख त सुँघ्न आई । बोक्सी त रहिछे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस्ता प्रयासहरु थुप्रो भएका छन् तर, प्रयास नगरे पनि हुन्छ । न यहाँ आमाले मुख सुँघ्न जान्छे, न बाले बोक्सीको आरोप लगाउनेछ ।’
सम्बन्ध बिगार्ने तर्फ लगाउने बुद्धि बिकास तर्फ लागाए हुन्छ उनले व्यंग्यात्मक सैलिमा भने बिगार्ने तर्फ लागेर समय बर्बाद गर्नु भन्दा स्थिर सरकारले चालेको बिकाश को बाटो मा लागाए सबैलाइ राम्रो हुने बताए ।
पछिल्लो समय नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विवाद देखिएको थियो । प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी कानुनहरु बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुका साथै माओवादीलाई सिध्याइयो, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ठाने अर्को माओवादी जन्मिने चेतावनी दिएका थिए ।
डाँका मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा
सन्तोषी माताको दर्शन गरि आजको दिनको सुरुवात गर्नुहोस